Ardada Minneapolis oo lacag ugu deeqay Soomaalida dhibaateysan
Ardada Minneapolis oo lacag ugu deeqay Soomaalida dhibaateysan	Last Updated on Tuesday, 05 June 2012 20:05	Tuesday, 05 June 2012 19:53	Iskool ku yaala magaalada Minneapolis oo lagu magacaabo Seward Montessori ayaa lacag ugu deeqay Soomaalida ku dhibaateysan Soomaaliya. Iskoolkan waxaa dhigta caruur yar yar oo ah kindergarten ilaa iyo class-ka 8deedaad.
Waxay lacagta ugu dhiibeen oo ay gudeensiiyeen ururka ARC. Ururka ARC waa urur ka shaqeeya Soomaaliya oo caawiya Soomaalida dhibaateysan. Waxaa ururka ka wakiil ahaa oo lacagta ka gudoontay ardada Shukri Abdinur.
Shukri waxay u mahadcelisay ardada lacagta soo aruurisay. Waxay u sheegtay lacagta ay soo aruuriyeen in ay wax badan u tari doonto dad aanan wax badan haysan oo dhibaateysan. Waxay kaloo Shukri tilmaantay in uu iskoolkooda yahay kii soo aruuriyay lacagta ugu badan.
Lacagta iskoolka laga gudoomay waxay gaareysay $2914.31. Waxaa kale oo ay ardada lacag gudoonsiiyeen Confederation of Somali Community. Waxaa lacagta ardada ka gudoomay hogaamiyaha ururka Dr. Said Fahiye.
Minneapolis Public Schools waxay qeyb ka yihiin barnaamijka “I Am A Star” oo ah barnaamij loogu talagalay Soomaalida dhibaateysan in lagu caawiyo. Lacagta ay ardada aruuriyeena waxay ku bixi doontaa qaabkaas. Back to Top